Sida Loo Noqdo Qoraa: 50 Talooyin oo ka yimi fanaaniinta la aqoonsan yahay
Qoraa Ingiriis iyo dadwayne. Qoraaga 1984-kii dystopia iyo sheeko faneedka Animal Farm, oo dhaleeceeyay bulshada kalitaliska ah. Waxa uu ku noolaa oo ka shaqeeyay qarnigii XX.
Weligaa ha isticmaalin tusaale, isbarbardhigga, ama odhaah kale oo aad inta badan ku aragto warqadda.
Weligaa ha isticmaalin erey dheer oo aad kaga bixi karto mid gaaban.
Haddaad erey tuuri karto, had iyo jeer ka takhalus.
Weligaa ha isticmaalin cod dadban haddii aad isticmaali karto mid firfircoon.
Weligaa ha isticmaalin ereyo la soo amaahday, ereyo saynis ama xirfadeed haddii lagu beddeli karo ereyo laga soo qaatay luqadda maalinlaha ah.
In la jebiyo mid ka mid ah xeerarkan ayaa ka wanaagsan in la qoro wax bahalnimo ah.
Mid ka mid ah qorayaasha Mareykanka ee ugu saameynta badnaa qarnigii hore. Qaar badan oo ka mid ah shuqullada Vonnegut, sida Titan's Sirens iyo Cat's Cradle, waxay noqdeen kuwo caan ku ah khayaali bini'aadantinimo.
U isticmaal wakhtiga shisheeyaha oo dhammaystiran si aan u dareemayn wakhti lumis.
Sii akhristaha ugu yaraan hal halyey oo aad rabto in aad u xididdo naftaada.
Dabeecad kastaa waa inay wax rabtaa, xitaa haddii ay tahay koob biyo ah.
Jumlad kastaa waa inay u adeegtaa mid ka mid ah laba ujeedo: si loo muujiyo geesiga ama in hore loo sii wado dhacdooyinka.
Ku bilow sida ugu dhow dhammaadka intii suurtogal ah.
Noqo mid murugaysan. Si kasta oo ay u qurux badan yihiin oo aan waxba galabsan sida jilayaashaaga, ula dhaqan si xun: akhristuhu waa inuu arko waxa ay ka samaysan yihiin.
Qor si aad uga farxiso hal qof oo keliya. Haddii aad furto daaqadda oo aad sameyso, si aad u hadasho, jacaylka aduunka oo dhan, sheekadaadu waxay qaban doontaa oof-wareen.
Qoraa Ingiriisi casriga ah, oo aad loogu jecel yahay taageerayaasha khiyaaliga ah. Shaqada muhiimka ah ee Moorcock, wareegga mugga badan ee ku saabsan Elric ee Melnibone.
Waxaan qaanuunkaygii ugu horreeyay ka soo qaatay Terence Hanbury White, oo ah qoraaga seefta dhagaxa iyo buugaag kale oo ku saabsan King Arthur. Waxay ahayd sidan: akhri. Akhri wax kasta oo gacanta ku soo dhaca. Waxaan had iyo jeer kula talinayaa dadka raadinaya inay qoraan khiyaali ama khayaali saynis ama sheeko-jacayl inay joojiyaan akhrinta noocyadan oo ay wax ka qabtaan wax kasta oo kale, laga bilaabo John Bunyan ilaa Antonia Bayette.
Soo hel qoraa aad majeerto (Konrad anigaa iska leh) oo ku koobiyee sheekooyinkiisa iyo jilayaashiisa sheekadaada. Noqo fanaan ku dayda sayidka si aad u barato sida wax loo sawiro.
Haddi aad qorayso tiraab sheeko-xarig ah, soo bandhig jilayaasha ugu waaweyn iyo mawduucyada ugu muhiimsan ee saddexaad ee hore. Waxaad ugu yeeri kartaa hordhac.
Samee mawduucyada iyo jilayaasha saddexaad ee labaad, horumarinta shaqada.
Mawduucyada dhammaystiran, muuji siraha iyo in ka badan saddexaad ee u dambeeya, denouement.
Mar kasta oo ay suurtogal tahay, la soco kuwa yaqaana geesiyaasha iyo falsafadooda ficillo kala duwan. Tani waxay gacan ka geysaneysaa in la joogteeyo xiisadda xiisaha leh.
Karootada iyo Usha: geesiyaasha waa in la daba-galiyaa (waalle ama xumaan) oo la raadiyaa (fikrado, walxo, shakhsiyad, siraha).
Qoraa Maraykan ah qarnigii 20aad. Waxa uu caan ku noqday shaqooyinka fadeexada leh ee waqtigiisii ​​​​sida Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn iyo Black Spring.
Ku shaqee hal shay ilaa aad dhammayso.
Ha ka welwelin. Si deggan oo farxad leh u shaqee, wax kasta oo aad sameyso.
U dhaqan sida qorshaha yahay, ha u dhaqmin niyadda. Joogso wakhtiga lagu balamay.
Marka aadan wax abuuri karin, shaqee.
Sibidhka wax yar maalin kasta halkii aad ku dari lahayd bacrimin cusub.
Dadnimo joog! La kulan dad, booqo meelo kala duwan, cab haddi aad rabto.
Ha u noqon faras qabyo ah! Kaliya ku shaqee farxad.
Ka tag qorshaha haddii aad u baahan tahay, laakiin ku soo noqo maalinta xigta. Diirada saar Soo koobid Ciribtirka
Iska ilow buugaagta aad rabto inaad qorto. Ka fikir oo kaliya midka aad qorto.
Si degdeg ah u qor oo had iyo jeer. Sawir, muusig, saaxiibo, filimaan, waxaas oo dhan shaqada ka dib.
Mid ka mid ah qorayaasha cilmiga sayniska ee ugu caansan waqtigeena. Qalinkiisa hoostiisa waxaa ka soo baxay shuqullo ay ka mid yihiin American Gods iyo Stardust. Si kastaba ha ahaatee, ma aha oo kaliya iyaga ayaa la duubay.
Erey ku dar. Raadi erayga saxda ah, qor.
dhame waxaad qorayso. Si kasta oo kharashku yahay, la soco waxaad bilowday.
Dhig qoraaladaada. U akhri sida adigoo samaynaya markii ugu horeysay. U tus shaqadaada asxaabta jecel wax la mid ah oo aad ixtiraamto ra'yigooda.
Xasuusnoow, marka ay dadku yiraahdaan wax waa khaldan yihiin ama aysan shaqaynayn, had iyo jeer waa sax. Marka ay sharxaan waxa saxda ah ee khaldan iyo sida loo hagaajiyo, had iyo jeer way khaldan yihiin.
Sax qaladaadka. Xasuusnoow, waa in aad iska daysaa shaqada ka hor inta aysan kaamil noqon oo aad bilowdo midda xigta. Hiigsiga wanaaga waa hiigsiga hiigsiga. Hore u soco
Kaftankaaga ku qosli.
Xeerka ugu weyn ee qoraalku waa: Haddii aad ku abuurto kalsooni kugu filan naftaada, wax walba waad samayn kartaa. Waxa kale oo ay noqon kartaa xukunka nolosha oo dhan. Laakin waxa ay ugu fiican tahay qorista.
Master of tiraab gaaban iyo classic of suugaanta Ruushka oo si dhib leh ugu baahan hordhac.
Waxa loo malaynayaa in qoraagu, marka lagu daro awoodaha maskaxeed ee caadiga ah, ay tahay in uu waayo-aragnimo u leeyahay gadaashiisa. Kharashka ugu badan waxaa helaya dadka soo maray dabka, biyaha iyo tuubooyinka naxaasta, tan ugu hooseysa, dabeecadaha ayaa jira oo aan la kharribin.
Inaad qoraa noqoto maaha wax adag. Ma jiro fakhri aan heli karin tartame naftiisa ah, mana jirto wax aan jirin oo aan helin akhriste ku habboon. Sidaa darteed, ha ka xishoon ... Warqada hortaada dhig, qalinka gacantaada ku qaado, adigoo ka xanaajinaya fekerka maxbuuska ah, qor.
Aad bay u adag tahay in aad noqoto qoraa wax daabaca oo akhriya. Taas awgeed: si buuxda ha u akhriyin oo hay karti cabbirka ugu yaraan hadhuudh lentil ah. Maqnaanshaha karti-weyn, waddooyin iyo kuwo yaryar.
Haddii aad rabto inaad qorto, markaa sidaas samee. Marka hore dooro mawduuc. Halkan waxaa lagu siinayaa xorriyad buuxda. Waxaad isticmaali kartaa gar-qaadasho iyo xitaa gar-daran. Laakin, si aan mar labaad loo furin Ameerika oo aan mar kale loo abuurin baaruud, ka fogow kuwa muddo dheer daalan.
Adiga oo male-awaalkaaga daaya, gacantaada qabo. Ha u ogolaan in ay raacdo tirada xariiqyada. Mar kasta oo aad gaaban tahay iyo inta badan ee aad wax qorayso, ayaa aad iyo aad u badan oo aad u badan tahay in la daabaco. Soo koobid arrimaha gabi ahaanba ma xumeeyaan. Laastikada fidsan waxay tiraysaa qalin aan ka roonayn kan aan fidnayn.
Qoraaga Ingiriis ee casriga ah, qoraaga ugu iibinta badan ee Ilkaha Cad, Ururiyaha Sawir qaade, iyo Quruxda.
Haddii aad caruur tahay, hubi inaad wax badan akhrido. Ku bixi waqti ka badan kan wax kasta oo kale.
Haddii aad tahay qof weyn, isku day inaad u akhrido shaqadaada sida qof qalaad u akhriyo. Ama si ka sii wanaagsan, sida cadowgaagu u akhriyi lahaa.
Ha kor u qaadin wicitaankaaga. Waxaad qori kartaa jumlado wanaagsan ama ma awoodid. Ma jirto qaab nololeed oo qoraa ah. Waxa muhiimka ah waa waxa aad kaga tagto bogga.
Qaado nasiyo la taaban karo inta u dhaxaysa qorista iyo tafatirka.
Ku qor kombuyuutar aan ku xidhnayn internetka.
Ilaali wakhtigaaga shaqada iyo goobtaada. Xataa dadka kuugu muhiimsan.
Ha isku khaldin sharafta iyo guusha.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, Sida Loo Noqdo Qoraa: 50 Talooyin oo ka yimi fanaaniinta la aqoonsan yahay!